China 15 Khz Ultrasonic ịgbado ọkụ Generator Transducer na Booster Horn Square Nkedo rụpụta na Factory | Qianrong
15 Khz Ultrasonic ịgbado ọkụ Generator Transducer na Booster Horn Square Nkedo
Nhazi QR-15K QR-20K
Ugboro 15Khz 20Khz
Ike 2600w 1500w
Voltaji 220V 220V
Generator Igwe na-enye ọkụ Igwe na-enye ọkụ
Ngwongwo nke Mpi Nchara Nchara
Akụkụ nke mpi 120 * 25mm 110 * 20mm
Net arọ nke mpi 11kgs 5.5kgs
Akụkụ nke generator 250 * 150 * 300mm 250 * 150 * 300mm
Net arọ nke generator 6kgs 6kgs
Ngwugwu Okwu osisi Okwu osisi
Ngwa Non kpara nkpuchi ịgbado ọkụ Non kpara nkpuchi ịgbado ọkụ
Ultrasonic ịkwa akwa igwe isi nwere ike ịkwanye ọtụtụ akwa thermoplastic. E jiri ya tụnyere agịga nkịtị na ịkwa akwa, ultrasonic ịkwa akwa anaghị achọ agịga na eri, akwa akwa akwa, akwa akara na ọsọ ọsọ ọsọ.
Ultrasonic mask machine setịpụrụ bụ ngwakọta nke 15Khz na 20Khz ultrasonic transducers, mpi, ndị isi mgbatị ígwè pụrụ iche ma na-akwado ọkọnọ CNC pụrụ iche. Ngwunye ike nke ultrasonic na-agbanwe ike obodo na 20Khz dị elu na nnukwu ọkụ AC ma nye ya transducer ultrasonic. Na ultrasonic transducer na-agbanwe ike eletriki n'ime ike igwe (ultrasonic). Onye ntụgharị ahụ na-emepụta njupụta mgbe ọ na-emegharị telescoping na ụzọ ogologo, wee nyefee ya na isi ịgbado ọkụ site na mpi ahụ. Si otú ahụ, ịgbado ọkụ isi na-ịgbado ọkụ.
E jiri ya tụnyere ụdị agịga ndị nwere ụdị agịga, wiwi na-enweghị nke ọma nwere uru ndị a.
1. Iji ultrasonic ịgbado ọkụ, iwepu mkpa agịga na eri, iwepu mkpa Ugboro agịga mgbanwe, na-enweghị gbajiri nkwonkwo nke omenala eri ịkwa akwa, na neatly ịcha na akara textiles. Kwa akwa na-arụkwa ihe ịchọ mma. Strong nrapado ike, nwere ike nweta waterproof mmetụta, doro anya embossing, atọ akụkụ embossed mmetụta na n'elu, ngwa ngwa na-arụ ọrụ ọsọ, ezi ngwaahịa mmetụta, ọzọ elu-ọkwa na ndị mara mma, àgwà na-ekwe nkwa.
2. N'iji ultrasonic na ígwè pụrụ iche nhazi, oghere ndị a kara akara agaghị agbawa, agaghị emerụ ọnụ nke ákwà ahụ, ọ gaghị enwekwa burrs ma ọ bụ curling.
3. Ọ dịghị preheating a chọrọ n'oge rụpụta na-aga n'ihu ọrụ kwere omume.
4. Ọrụ ahụ dị mfe, enweghịkwa ọdịiche dị ukwuu na usoro ọrụ ịkwa akwa ọdịnala, ndị ọrụ ịkwa akwa nkịtị nwere ike ịrụ ọrụ ya.
5. Ọnụ ego dị ala, 5 ruo 6 ugboro ngwa ngwa karịa igwe ọdịnala, yana arụmọrụ dị elu.
Nke gara aga: High Frequency 40Khz Vibration Ultrasonic Rubber Cutting Agụba na Digital Generator
Osote: 20Khz 2000w Ultrasonic Transducer Booster Assembly maka Ntị Loop Fixation Machine